Waxsoosaarka 'Master of Mattress Production' ' JLH Furaashka
JLH KHATARAHA CUSUB EE CADAWADA
JLH ee # 1 ee Kangtai South Road, Beerta warshadaha ee Shatou, Degmada Nanhai, FoShan City, Gobolka Guangdong, Shiinaha. Alaabada ugu waa weyni JLH Khariiradaha wax soo saarka cusub. Qiimaha tartanku, waxay noo ahayd mid caan ah oo sidoo kale ka dhigaysa JLH inay noqoto mid tartan badan. Ka samaysan tayo tayo sare leh, sheyga JLH waxaa la caddeeyay inuu yahay mid waara oo la isticmaalo ka dib xilliyada imtixaanka oo uu leeyahay nolol adeeg oo ka dheer kan tii hore. Sheyga ayaa helaya hambalyo fara badan: waxay umuuqataa mid jilicsan, quruxsan oo si fiican u habboon. Hagaaji heerkulka guud.
21CA-09 Gaariga Furaashka Xilliga Xaadirka ah ee Qiimaha Jaban ee ugu Qiimaha Badan
JLH ee # 1 ee Kangtai South Road, Beerta warshadaha ee Shatou, Degmada Nanhai, Foshan City, Gobolka Guangdong, Shiinaha. Waxyaabaha ugu waaweyn 21CA-09 Qiimaha Xirmooyinka Xilliga Xilliga Xilliga Jiilaalka ee Ugu Qiimaha Badan. Alaabtu waxay u badan tahay inay soo ururto bakteeriyada. Agabyada loo isticmaalay waxay muujinayaan sifooyin adag oo bakteeriyada bakteeriyada keena oo yareynaya koritaanka bakteeriyada. Alaabtu waxay taagan tahay deegaanka oo leh guryihiisa birta burburay iyo daboolka iftiinka dab-baarka ka ilaalin kara. Waxay leedahay nolol muddo dheer shaqeyneysa oo ay ku xiran tahay qaab dhismeedkeeda adag. JLH waxaa si cusub u qaabeeysay koox naqshadeeyayaal xirfadlayaal ah. Waxay ka buuxaan fikrado hal abuur leh waxayna qaataan aqbalaadda isbeddelada suuqa nalalka LED-ka.
Xaashiyaha Labaad ee Shandadaha jeebka
JLH ee # 1 ee Kangtai South Road, Beerta warshadaha ee Shatou, Degmada Nanhai, Foshan City, Gobolka Guangdong, Shiinaha. Waxyaabaha ugu waaweeyn ee loo yaqaan 'Double Layers Pocket Poress'. Iyada oo loo marayo naqshadaynta naqshadeynta, codsiga dhabta ah wuxuu muujinayaa in uu leeyahay qiime jaban iyo nolol adeeg muddo dheer. Sheygu wuxuu leeyahay nidaam jaakad ah si uu u nuugo saamaynta ciribta iyo garaaca wadnaha, sidaa darteed wuxuu u fidiyaa xannuun xanuun baabiiyayaasha. Sheyga waa fududahay in la joogteeyo. Dadku waxay isticmaali karaan maro qallalan si ay u tirtiraan boodhka waxayna si joogto ah u eegaan haddii ay jiraan fiilooyin waxyeello leh.
Soo-saaraha Soosaaraha Shiinaha
Hel faahfaahin dheeraad ah! faahfaahinta ku saabsan saldhigga sariirta saldhisan, taageerada sariirka.
SAMEE INAAN NOLOSHO NATIIJADAADA
Kaliya ku dhaaf emaylkaaga ama lambarka taleefankaaga foomka xiriirka si aan kuugu soo dirno xigasho bilaash ah oo ku saabsan naqshadeynta badan ee ballaaran!